36 Yakasimudzira Kubudirira Kuedza kweiyo Fashoni Indasitiri muna Kubvumbi 2021
ne admin pane 21-05-25
MunaKubvumbi, indasitiri yemafashoni yakaramba ichiita kusimudzira kwekuedza, kunyanya zvigadzirwa zvemitambo yeshangu, senge Adidas, Asics, Mr. Porter nemamwe mabhii. Ndichiri kutsvaga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, vakaedzawo nepese pavaigona napo. Izvi zvigadzirwa zvekuvandudza zviri nyore kushandiswa mune zvakatipoteredza ....
Gen Z inovandudza kusimudzira kweTikTok #Thrifthaul uye Kurumidza Mufashoni #Sheinhaul chiyero
Tiri kupupurira inoenderera fashoni shanduko? Geo-vanoziva vechidiki uye vachiri kuyaruka vari mubishi kutsvaga maitiro emafashoni panguva yedenda rekuita kuti nharaunda iratidzike yemufashoni uye yemafashoni. Ivo vakabatsira kutyaira kukwira kwezvipfeko zvekutengesa mapuratifomu (senge Vinted uye Depop) uye r ...
Hapana chinhu chakangofanana nehembe nyowani, chiripo? IUK inovada. Sekureva kwemushumo weEnvironmental Audit Committee (EAC), iyo UK inodya zvakapetwa kashanu zvakapetwa nhasi kupfuura zvayaiita muma1980. Izvo zvinodarika chero imwe nyika muEurope uye zvakaenzana kutenderera 26.7kgs pa ...
Anopihwa mvumo yeDisney neNBCU
Mushure mekuenderera kwekushanda nesimba uye kugadzirira, fekitori yedu yakapfuudza iyo Disney uye NBCU odhita muna Chivabvu, 2019, ine FAMA inoshanda takave vanogoneswa mutengesi weDisney, pamwe neNBCU. Sechirangaridzo chinonyatso kuzivikanwa chinopa mbatya dzakachengeteka uye dzakavimbika nezvimwe, Disney neNBCU yaive nezvinodiwa zvepamusoro ...
Iyo ecology yemafashoni anoshanda marara
Gore rakapera, H & M yakatanga batch yayo yekutanga ye "kuvhara chiuno" zvigadzirwa zvemafashoni, izvo zvinogadzirwa kubva kuzvipfeko zvekare. Kambani iyi iri kudawo kuwedzera kugadzirwa kwembatya dzakadai nezvikamu mazana matatu kubva muzana mukupera kwegore rino. Ipo 95 muzana yenguvo dzakaraswa dzinogona kudzokorodza ...